Fandaminana ny fizarana Fisotroan-dronono eny amin'ny Tahirimbolam-panjakana :: Aogositra 2020
Ilazana isika mpandray fisotroan-dronono fa manomboka ny Alatsinainy 17 Aogositra 2020 ny fizarana ny pension amin'ity volana ity. Izany moa dia manaraka ny fitsinjarana araky ny laharana “Pension” hatrany.
Noho ny fiparitahan’ny valanaretina “Coronavirus” dia iangaviana antanan-droa isika hanaraka ny fitsinjarana izay napetraka. Raha misy ny tsy fahafahana amin’ny fotoana anjaranao dia misokatra foana ny Tahirimbolam-panjakana.
Afaka raisina foana ny "Pension" aorian’ireo andro izay nametrahana lamina manokana ireo. Marihina fa maharitra telo volana ny fahafahana mandoa ny "Pension" iray.
Mankasitraka indrindra tompoko